Ndụ ebighi ebi - www.yomelijah.com
The "njikọ" na-acha anụnụ anụnụ edere French, na-eduzi gị na otu isiokwu na French. N'okwu a, ị nwekwara ike ịhọrọ asụsụ atọ ọzọ: Bekee, Spanish, Portuguese.
(Isiokwu ahụ "Ozizi elementrị nke Akwụkwọ Nsọ" bụ mgbe isiokwu edemede "Ndụ ebighi ebi")
Ndụ ebighị ebi na paradaịs elu ala (vidiyo dị na Twitter)
Olileanya na ọṅụ bụ ike nke ntachi obi anyị
"Ma mgbe ihe ndị a niile malitere ime, guzonụ kwem, weliekwanụ isi unu elu, n’ihi na oge Chineke ga-anapụta unu eruola nso"
Bayan mun kwatanta abubuwan da suka faru na ban mamaki kafin ƙarshen wannan zamanin, Yesu Kristi ya gaya wa almajiransa su “ɗaga kawunansu” domin cikar begenmu zai yi kusa.
Olee otú iji nọgide na-enwe ọṅụ n'agbanyeghị nsogbu onwe onye? Pọl onyeozi dere na anyị aghaghị ịgbaso ụkpụrụ Jizọs Kraịst, sị: “N’ihi ya, ebe ọ bụ na anyị nwere oké ìgwè ndị àmà a gbara anyị gburugburu, ka anyị tụfuo ibu arọ ọ bụla na mmehie ahụ nke na-ekegidekarị anyị. Ka anyị jirikwa ntachi obi na-agba ọsọ anyị na-agba, ebe anyị na-elegidesi Jizọs anya ike, bụ́ Nnukwu Onye Ndú nke okwukwe anyị na Onye na-eme ka okwukwe anyị zuo ezuo. N’ihi ọṅụ a ga-eme ka o nwee n’ọdịnihu, o diri ọnwụ ọ nwụrụ n’osisi ịta ahụhụ, o kweghịkwa ka ihere mee ya. Ọ nọdụla ala n’aka nri ocheeze Chineke. N’eziokwu, chesienụ echiche ike banyere onye ahụ diri ụdị mkparị ahụ ndị mmehie, ndị mere onwe ha ihe ọjọọ, kparịrị ya, ka ike wee ghara ịgwụ unu, unu adaa mbà” ( Ndị Hibru 12:1-3).
Jizọs Kraịst nwere ume n’oge nsogbu ihu site n’ọṅụ nke olileanya e debere n’ihu ya. Ọ dị mkpa iweta ume iji mee ka ntachi obi anyị sie ike, site na “ọńụ” nke olileanya ndụ ebighị ebi nke e debere n’ihu anyị. A bịa n’ihe banyere nsogbu anyị, Jizọs Kraịst kwuru na anyị ga na-edozi ha kwa ụbọchị: “N’ihi ya, ana m asị unu: Kwụsịnụ ichegbu onwe unu+ banyere ndụ unu maka ihe unu ga-eri ma ọ bụ ihe unu ga-aṅụ, ma ọ bụ maka ihe unu ga-eyi n’ahụ́. Ọ̀ bụ na ndụ adịghị mkpa karịa ihe oriri? Ahụ́ ọ́ dịghịkwa mkpa karịa uwe? Leruonụ nnụnụ anya. Ha anaghị akụ mkpụrụ. Ha anaghị aghọrọ mkpụrụ, ha anaghịkwa ekpokọta mkpụrụ n’ụlọ a na-akwasa ihe. Ma, Nna unu nke eluigwe na-enye ha nri. Ọ̀ bụ na unu abaghị uru karịa ha? Ònye n’ime unu ga-agbakwụnyeli otu kubit n’afọ ndụ ya maka na ọ na-echegbu onwe ya? Gịnị mere unu ji na-echegbu onwe unu banyere uwe? Mụtanụ ihe n’otú okooko lili dị n’ọhịa si eto. Ha anaghị arụgbu onwe ha n’ọrụ, ha anaghịkwa akpa ogho. Ma ana m asị unu na Solomọn eyighị uwe mara mma ka otu n’ime ha n’agbanyeghị ebube ya niile. Ọ bụrụ na Chineke si otú a yiwe ahịhịa ndụ dị n’ọhịa uwe, nke dị ebe a taa, ma echi, a tụba ya n’ọkụ, ọ̀ bụ na ọ gaghị eyiwe unu uwe karịa, unu ndị okwukwe nta? N’ihi ya, unu echegbula onwe unu mgbe ọ bụla, sị, ‘Gịnị ka anyị ga-eri?’ ma ọ bụ, ‘Gịnị ka anyị ga-aṅụ?’ ma ọ bụ, ‘Gịnị ka anyị ga-eyi?’ N’ihi na ihe ndị a niile bụ ihe ndị mba ọzọ na-achụsi ike. Nna unu nke eluigwe ma na ihe ndị a niile dị unu mkpa" (Matiu 6:25-32). Ụkpụrụ ahụ dị mfe, anyị aghaghị iji ugbu a dozie nsogbu anyị na-ebilite, na-atụkwasị obi na Chineke, iji nyere anyị aka ịchọta ngwọta: "N’ihi ya, burunụ ụzọ na-achọ Alaeze Chineke na ezi omume Chineke, a ga-atụkwasịkwara unu ihe ndị ọzọ a niile. N’ihi ya, unu echegbula onwe unu mgbe ọ bụla maka echi, n’ihi na a ga-enwe ihe unu ga-eche banyere ya echi. Ihe ọjọọ nke ụbọchị nke ọ bụla ezuorola ya" (Matiu 6:33,34). Itinye ụkpụrụ a n'ọrụ ga-enyere anyị aka ijikwa ike nke uche ma ọ bụ nke mmetụta uche nke ọma iji nagide nsogbu anyị kwa ụbọchị. Jizọs Kraịst kwuru ka anyị ghara ichegbu onwe anyị nke ukwuu, nke nwere ike ịgbagha uche anyị ma napụ anyị ike ime mmụọ niile (Tụlee Mak 4:18, 19).
Iji laghachi n’agbamume ahụ e dere ná Ndị Hibru 12:​1-⁠3, anyị aghaghị iji ikike iche echiche anyị lekwasị anya n’ọdịnihu site n’inwe ọṅụ n’olileanya, nke bụ́ akụkụ nke mkpụrụ nke mmụọ nsọ: “Ma mkpụrụ nke mmụọ nsọ bụ ịhụnanya, ọṅụ, udo, ndidi, obiọma, ịdị mma, okwukwe, ịdị nwayọọ, mmadụ ijide onwe ya. E nweghị iwu na-emegide ihe ndị a” (Ndị Galeshia 5:22,23). E dere na Baịbụl na Jehova bụ Chineke obi ụtọ nakwa na Onye Kraịst na-ekwusa “ozi ọma nke Chineke obi ụtọ” (1 Timoti 1:11). Ọ bụ ezie na ụwa a nọ n’ọchịchịrị ime mmụọ, anyị aghaghị ịbụ isi iyi nke ìhè site n’ozi ọma anyị na-ezisa, kamakwa site na olileanya anyị nke anyị chọrọ ịkọrọ ndị ọzọ: “Unu bụ ìhè nke ụwa. E nweghị ike izo obodo ezo ma ọ bụrụ na ọ dị n’elu ugwu. Ndị mmadụ na-amụnye ọkụ ma dọsa ya n’elu ihe e ji adọsa ọkụ, ọ bụghị n’okpuru nkata. Ọ na-enwukwara ndị niile nọ n’ime ụlọ. Ununwa kwa, meenụ ka ìhè unu na-enwu n’ebe ndị mmadụ nọ, ka ha hụ ọrụ ọma unu+ wee nye Nna unu nọ n’eluigwe otuto” (Matiu 5:14-16). E ji ebumnobi nke ọṅụ n’olileanya mepụta vidio na-esonụ nakwa isiokwu ahụ, bụ́ nke dabeere n’olileanya nke ndụ ebighị ebi: “Ṅụrịanụ ọṅụ, nweekwanụ ezigbo obi ụtọ, n’ihi na ụgwọ ọrụ unu dị ukwuu n’eluigwe, n’ihi na otú a ka ha si kpagbuo ndị amụma bu unu ụzọ” (Matiu 5:12). ka anyị na-eme ka ọṅụ Jehova anyị wusiri ike: "Atụla mwute, n'ihi na ọṅụ Jehova bụ ebe unu e wusiri ike" (Nehemaịa 8:10).
Ndụ ebighị ebi na paradaịs elu ala
"ị ga na-aṅụrịkwa naanị ọṅụ" (Diuterọnọmi 16:15)
Ndụ ebighi-ebi site na ntọhapụ nke mmadụ site n’agbụ nke mmehie
"N’ihi na Chineke hụrụ ụwa n’anya nke ukwuu nke na o nyere Ọkpara ọ mụrụ naanị ya, ka e wee ghara ibibi onye ọ bụla nke nwere okwukwe na ya, kama ka o nwee ndụ ebighị ebi. (...) Onye nwere okwukwe n’Ọkpara ahụ nwere ndụ ebighị ebi; onye na-enupụrụ Ọkpara ahụ isi agaghị ahụ ndụ, kama ọnụma Chineke na-adịgide n’ahụ́ ya"
Jesus Christ, ke ini okodude ke isọn̄, ama ekpep ediwak ini idotenyịn nsinsi uwem. Agbanyeghị, ọ kuziri na a ga-enweta ndụ ebighi ebi site n’okwukwe n’àjà nke Kraịst (Jọn 3:16,36). Àjà Kraịst chụrụ ga-ekwe ka ahụike na ịmụgharị na mbilite n'ọnwụ.
Ntọhapụ site na ngọzi nke àjà Kraịst
"Dị nnọọ ka Nwa nke mmadụ bịara, ọ bụghị ka e jeere ya ozi, kama ka o jee ozi, ka o nyekwa mkpụrụ obi ya ka ọ bụrụ ihe mgbapụta n’ọnọdụ ọtụtụ mmadụ"
"Jehova wee gbanwee ọnọdụ Job, nke ọ nọ na ya dị ka onye a dọọrọ n’agha, mgbe o kpere ekpere maka ndị enyi ya. Jehova wee nyeghachi Job ihe niile o nwere, okpukpu abụọ" (Job 42:10). Ọ ga-abụ otu ihe ahụ maka ndị so n'oké ìgwè mmadụ ahụ ga-alanarị oké mkpagbu ahụ, Jehova Chineke, site n'aka Eze Jizọs Kraịst, ga-agọzi ha: “Lee! Anyị na-akpọ ndị tachiri obi ndị obi ụtọ. Unu anụwo banyere ntachi obi Job, unu ahụwokwa ihe Jehova mesịrị mee, na Jehova nwere obi ọmịiko dị ukwuu, na-emekwa ebere” (Jems 5:11) (Eze Jisos Kraist g’agọzi ndi mmadu).
Àjà Kraịst na-ahapụ mgbaghara, mbilite n'ọnwụ, ọgwụgwọ.
(Àjà Kraịst na-ahapụ mgbaghara, mbilite n'ọnwụ, ọgwụgwọi)
(Akwa otuowo ke idụt ẹyebọhọ akwa ukụt (Nkpughe 7:9-17))
Àjà Kraịst chụrụ ga-agwọ ụmụ mmadụ
“Ọ dịghị onye bi na ya nke ga-asị: “Ana m arịa ọrịa.” Ndị bi n’ala a ga-abụ ndị a gbaghaara njehie ha” (Aịzaya 33:24).
"Mgbe ahụ ka a ga-emeghe anya ndị ìsì, a ga-emeghekwa ntị nke ndị ntị chiri. Mgbe ahụ ka onye ngwọrọ ga-awụli elu dị ka oké ele, ire onye ogbi ga-etikwa mkpu ọṅụ. N’ihi na mmiri ga na-agbapụta n’ala ịkpa, mmiri iyi ga na-agbapụtakwa na mbara ọzara” (Aisaia 35:5,6).
Àjà Kraịst ga-eme ka o kwe omume ịbụ onye na-eto eto
"Ka ahụ́ ya dị ọhụrụ karịa otú ọ dị n’oge ọ bụ nwata; Ka ọ laghachi otú ọ dị n’oge o nwere ike okorobịa" (Job 33:25).
Àjà Kraịst chụrụ ga-ekwe ka mbilite n'ọnwụ nke ndị nwụrụ anwụ
“Ọtụtụ ndị bụ́ ndị na-arahụ ụra n’ime ala ga-eteta” (Daniel 12: 2).
“Enwekwara m olileanya n’ebe Chineke nọ, bụ́ olileanya nke ndị a n’onwe ha nwekwara, na a gaje inwe mbilite n’ọnwụ nke ma ndị ezi omume ma ndị ajọ omume” (Ọlụ Ndịozi 24:15).
“Ka ihe a ghara iju unu anya, n’ihi na oge awa na-abịa mgbe ndị niile nọ n’ili ncheta ga-anụ olu ya wee pụta, ndị mere ezi ihe ga-enweta mbilite n’ọnwụ nke ndụ, ndị mere ajọ omume ga-enweta mbilite n’ọnwụ nke ikpe” (Jọn 5:28,29).
"M wee hụ otu nnukwu ocheeze dị ọcha na onye nọ ọdụ na ya. Ụwa na eluigwe sikwa n’ihu ya gbapụ, ọ dịghịkwa ebe a hụrụ ha ga-adị. M wee hụ ndị nwụrụ anwụ, ndị ukwu na ndị nta, ka ha guzo n’ihu ocheeze ahụ, e meghekwara akwụkwọ mpịakọta dị iche iche. Ma e meghere akwụkwọ mpịakọta ọzọ; ọ bụ akwụkwọ mpịakọta nke ndụ. E kpekwara ndị nwụrụ anwụ ikpe site n’ihe e dere n’akwụkwọ mpịakọta ndị ahụ, dị ka omume ha si dị. Oké osimiri hapụkwara ndị nwụrụ anwụ nọ n’ime ya, ọnwụ na Hedis hapụkwara ndị nwụrụ anwụ nọ n’ime ha, e kpekwara ha ikpe n’otu n’otu dị ka omume ha si dị” (Nkpughe 20:11-13).
A ga-ekpe ndị ajọ omume ahụ a kpọlitere n’ọnwụ ikpe na-adabere n’omume ha dị mma ma ọ bụ nke ọjọọ, na paradaịs ga-adị n’ụwa n'ọdịnihu. (Nchịkwa mbilite n’ọnwụ nke ụwa; Mbilite n’ọnwụ nke eluigwe; Mbilite n’ọnwụ nke ụwa).
Àjà Kraịst ga-eme ka oké ìgwè mmadụ lanahụ oké mkpagbu ahụ ma nweta ndụ ebighị ebi na-agaghị anwụ anwụ
“Mgbe ihe ndị a gasịrị, ahụrụ m, ma, lee! oké ìgwè mmadụ, nke onye ọ bụla na-enweghị ike ịgụta ọnụ, ndị si ná mba niile na ebo niile na ndị niile na asụsụ niile pụta, ka ha guzo n’ihu ocheeze ahụ nakwa n’ihu Nwa Atụrụ ahụ. Ha yi uwe mwụda na-acha ọcha; ha jikwa igu nkwụ n’aka. Ha wee na-eti mkpu n’oké olu, sị: “Nzọpụta anyị si n’aka Chineke anyị, bụ́ onye nọ ọdụ n’ocheeze ahụ, nakwa n’aka Nwa Atụrụ ahụ.”
Ndị mmụọ ozi niile guzokwa ocheeze ahụ na ndị okenye ahụ na ihe anọ ahụ dị ndụ gburugburu, ha wee gbuo ikpere n’ala, kpudo ihu ha n’ala n’ihu ocheeze ahụ ma kpọọrọ Chineke isiala, sị: “Amen! Ka ngọzi na otuto na amamihe na ekele na nsọpụrụ na ike na ume dịrị Chineke anyị ruo mgbe niile ebighị ebi. Amen.”
Otu n’ime ndị okenye ahụ wee sị m: “Ndị a yi uwe mwụda na-acha ọcha, olee ndị ha bụ, oleekwa ebe ha si bịa?” M wee sị ya ozugbo: “Onyenwe m, ọ bụ gị onwe gị maara.” O wee sị m: “Ndị a bụ ndị si n’oké mkpagbu ahụ pụta, ha asawokwa uwe mwụda ha, meekwa ka ọ na-acha ọcha n’ime ọbara Nwa Atụrụ ahụ. Ọ bụ ya mere ha ji nọrọ n’ihu ocheeze Chineke; ha na-ejekwara ya ozi dị nsọ ehihie na abalị n’ụlọ nsọ ya; Onye ahụ nke nọ ọdụ n’ocheeze ahụ ga-agbasakwa ụlọikwuu ya n’isi ha. 16 Agụụ agaghị agụ ha ọzọ, akpịrị agaghị akpọ ha nkụ ọzọ, anwụ agaghị achakwa ha, ha agaghịkwa enwe oké okpomọkụ, n’ihi na Nwa Atụrụ ahụ, onye nọ n’etiti ocheeze ahụ, ga-azụ ha dị ka atụrụ, ọ ga-edugakwa ha n’isi iyi nke mmiri nke ndụ. Chineke ga-ehichapụkwa anya mmiri ọ bụla n’anya ha.”” (Nkpughe 7:9-17) (Akwa otuowo ke idụt ẹyebọhọ akwa ukụt).
Ala-eze nke Chineke g willchi uwa
"M wee hụ eluigwe ọhụrụ na ụwa ọhụrụ; n’ihi na eluigwe mbụ na ụwa mbụ agabigawo, oké osimiri adịkwaghị. Ahụkwara m obodo nsọ ahụ, bụ́ Jeruselem Ọhụrụ, ka o si n’eluigwe, n’ebe Chineke nọ, na-agbadata. A kwadebekwara ya dị ka nwaanyị a na-alụ ọhụrụ nke a chọrọ mma maka di ya. M wee nụ ka otu oké olu si n’ocheeze ahụ na-asị: “Lee! Ụlọikwuu nke Chineke dịnyeere mmadụ, ya na ha ga-ebikwa, ha ga-abụkwa ndị nke ya. Chineke n’onwe ya ga-anọnyekwara ha. Ọ ga-ehichapụkwa anya mmiri niile n’anya ha, ọnwụ agaghị adị ọzọ, iru uju ma ọ bụ mkpu ákwá ma ọ bụ ihe mgbu agaghịkwa adị ọzọ. Ihe mbụ niile agabigawo”" (Nkpughe 21:1-4) (Nlekọta nke ala eze nke ala; Onye isi; Ndị ụkọchukwu; Ndi Livai).
"Unu ndị ezi omume, ṅụrịanụ ọṅụ n’ihi Jehova, nweekwanụ obi ụtọ. Tienụ mkpu ọṅụ, unu niile ndị obi ha dị ọcha" (Abụ Ọma 32:11)
Ndị ezi omume ga-adị ndụ ruo mgbe ebighị ebi ma ndị ajọ omume ga-ala n’iyi
"Ndị dị nwayọọ n’obi na-enwe obi ụtọ, n’ihi na ha ga-eketa ụwa" (Matiu 5:5).
"N’oge na-adịghị anya, ndị ajọ omume agaghịzi anọ. Ị ga-ele anya n’ebe ha na-anọ, Ma ha agaghị anọ ya. Ma ndị dị umeala n’obi ga-enweta ụwa, Obi ga-adịkwa ha ezigbo ụtọ maka na ha ga-anọ nnọọ n’udo. Onye ajọ omume na-akpara onye ezi omume nkata ọjọọ. Ọ na-ata ikikere ezé maka na ọ na-ewesa onye ezi omume iwe. Ma Jehova ga-achị ya ọchị, N’ihi na ọ ma na ụbọchị a ga-ebibi ya na-abịa. Ndị ajọ omume na-amịpụta mma agha ha, na-ekwekwa ụta ha Ka ha gbatuo ndị a na-emegbu emegbu na ndị ogbenye Nakwa ka ha gbuo ndị na-eme ihe ziri ezi. Ma mma agha ha ga-amaba ha n’obi. A ga-agbaji ụta ha. (...) N’ihi na a ga-anapụ ndị ajọ omume ike, Ma Jehova ga na-akwado ndị ezi omume. (...) Ma a ga-ebibi ndị ajọ omume. Ndị iro Jehova ga-ala n’iyi otú ahịhịa ndị dị n’ebe mara mma anụmanụ na-ata ahịhịa si akpọnwụ. Ha ga-apụ n’anya ka anwụrụ ọkụ. (...) Ndị ezi omume ga-enweta ụwa, Ha ga-ebikwa na ya ruo mgbe ebighị ebi. (...) Nwee olileanya n’ebe Jehova nọ, na-esokwa ụzọ ya, Ọ ga-emekwara gị amara, mee ka i nweta ụwa. Mgbe a ga-ebibi ndị ajọ omume, ị ga-ahụ ya. (...) Hụwa onye na-enweghị ihe a ga-eji taa ya ụta ama, Na-elekwa onye ezi omume anya, N’ihi na udo ga-adịrị ya n’ọdịnihu. Ma a ga-ebibi ndị niile na-emebi iwu. Ndị ajọ omume enweghị ọdịnihu. Ọ bụ Jehova na-azọpụta ndị ezi omume. Ọ bụ ebe a rụsiri ike nke ha na-agbaba n’oge ahụhụ. Jehova ga-enyere ha aka ma napụta ha. Ọ ga-anapụta ha n’aka ndị ajọ omume ma zọpụta ha, Maka na ha gbabara n’ime ya” (Abụ Ọma 37:10-15, 17, 20, 29, 34, 37-40).
"N’ihi ya, soro ụzọ ndị ezigbo mmadụ, Nọrọkwa n’ụzọ ndị ezi omume. N’ihi na ọ bụ naanị ndị ezi omume ga-ebi n’ụwa, Ọ bụkwa ndị na-enweghị ihe a ga-eji taa ha ụta ga-anọ na ya. Ma a ga-ekpochapụ ndị ajọ omume n’ụwa, A ga-ebibikwa ndị aghụghọ nọ na ya. (...) A ga agọzi onye ezi omume, Ma okwu onye ajọ omume na-eme ka a ghara ịmata ihe ọjọọ dị ya n’obi. A ga-echeta onye ezi omume ma gọzie ya, Ma aha ndị ajọ omume ga-efu” (Ilu 2:20-22; 10:6,7).
Agha agaghị adịkwa ọzọ, a ga-enwe udo n’ime obi na n’ụwa niile
"Unu nụrụ na a sịrị: ‘Hụ onye agbata obi gị n’anya ma kpọọ onye iro gị asị.’ Ma, ana m asị unu: Unu akwụsịla ịhụ ndị iro unu n’anya, na-ekpekwanụ ekpere maka ndị na-akpagbu unu, ka unu wee bụrụ ụmụ nke Nna unu nọ n’eluigwe, n’ihi na ọ na-eme ka anyanwụ ya waara ndị ọjọọ na ndị ọma. Ọ na-emekwa ka mmiri zooro ndị ezi omume na ndị ajọ omume. N’ihi na ọ bụrụ na ọ bụ ndị hụrụ unu n’anya ka unu hụrụ n’anya, gịnị ga-abụ ụgwọ ọrụ unu? Ọ̀ bụ na ndị ọnaụtụ anaghị eme otu ihe ahụ? Ọ bụrụkwa na ọ bụ naanị ụmụnne unu ka unu na-ekele, olee oké ihe unu na-eme? Ọ̀ bụ na ndị mba ọzọ anaghị emekwa otu ihe ahụ? N’ihi ya, unu kwesịrị izu okè otú Nna unu nke eluigwe zuru okè" (Matiu 5:43-48).
"N’ihi na ọ bụrụ na unu na-agbaghara ndị mehiere unu, Nna unu nke eluigwe ga na-agbagharakwa unu. Ma ọ bụrụ na unu anaghị agbaghara ndị mehiere unu, Nna unu agaghịkwa na-agbaghara unu mmehie unu" (Matiu 6:14,15).
"Jizọs wee sị ya: “Mịghachi mma agha gị n’ọbọ ya, n’ihi na ndị niile na-egbu ndị ọzọ mma agha ga-esi ná mma agha laa n’iyi"" (Matiu 26:52).
"Bịanụ, hụ ọrụ dị iche iche Jehova na-arụ, Otú o si mee ihe dị iche iche dị ịtụnanya n’ụwa. Ọ na-eme ka agha kwụsị n’ebe niile n’ụwa. Ọ na-agbaji ụta, na-agbajisịkwa ube. Ọ na-agba ụgbọ e ji alụ agha ọkụ" (Abụ Ọma 46:8,9).
"Ọ ga-ekpere mba dị iche iche ikpe, Doziekwara ọtụtụ ndị okwu ha. Ha ga-akpụgharị mma agha ha ka ha bụrụ mma ogè, Kpụgharịakwa ube ha ka ha bụrụ mma e ji akwa osisi. Mba agaghị eweli mma agha lụso mba ọzọ agha. Ha agaghịkwa amụ otú e si alụ agha" (Aịzaya 2:4).
"N’oge ikpeazụ, Ugwu nke ụlọ Jehova dị n’elu ya Ga-akwụsi ike n’ebe dị elu karịa ugwu ukwu niile. A ga-ebulikwa ya ka ọ dị elu karịa ugwu nta niile. Ndị dị iche iche ga-enurukwa na-agbago na ya. Ọtụtụ mba ga-ejekwa, sị: “Bịanụ ka anyị gbagoo n’ugwu Jehova, Gbagookwa n’ụlọ Chineke Jekọb. Ọ ga-akụziri anyị ụzọ ya. Anyị ga-ejekwa ije n’ụzọ ya.” N’ihi na a ga-esi na Zayọn nye iwu, Sikwa na Jeruselem kwuo ihe Jehova kwuru. Ọ ga-ekpere ọtụtụ ndị ikpe, Doziekwara mba ndị siri ike, ndị dị n’ebe dị anya, okwu ha. Ha ga-akpụgharị mma agha ha ka ha bụrụ mma ogè, Kpụgharịakwa ube ha ka ha bụrụ mma e ji akwa osisi. Mba agaghị eweli mma agha lụso mba ọzọ agha. Ha agaghịkwa amụ otú e si alụ agha. Onye ọ bụla n’ime ha ga-anọdụ ala n’okpuru osisi vaịn ya nakwa n’okpuru osisi fig ya. E nweghịkwa onye ga-emenye ha ụjọ, N’ihi na Jehova nke ụsụụ ndị agha ekwuola ya” (Maịka 4:1-4).
A ga-enwe nri n'ụba n'ụwa niile
"Nri ga-eju n’ụwa. Ọ ga-eju eju n’elu ugwu dị iche iche. Mkpụrụ a kụrụ n’ubi ya ga na-eme nke ọma ka osisi ndị dị na Lebanọn, Ndị nọ n’obodo ya dị iche iche ga na-amakwa pokopoko ka ihe a kụrụ n’ala" (Abụ Ọma 72:16).
"Ọ ga-emekwa ka mmiri zoo n’oge unu kụrụ mkpụrụ n’ala. Nri ala a ga-emepụta ga-adị mma, hiekwa nne. N’oge ahụ, anụ ụlọ unu ga-ata ahịhịa ná nnukwu ala ahịhịa juru" (Aịzaya 30:23).
Ọrụ ebube nke Jizọs Kraịst iji mee ka okwukwe sie ike n’olileanya nke ndụ ebighi ebi
“N’eziokwu, e nwere ọtụtụ ihe ndị ọzọ Jizọs mere, bụ́ ndị, ọ bụrụ na e dee ha edee n’ụzọ zuru ezu, m chere na ụwa apụghị ịba akwụkwọ mpịakọta ndị e dere ha” (Jọn 21:25)
Jizọs Kraịst na ọrụ ebube mbụ e dere n’Oziọma Jọn, o mere ka mmiri ghọọ mmanya: “N’ụbọchị nke atọ, e nwere oriri alụmdi na nwunye na Kena nke dị na Galili, nne Jizọs nọkwa n’ebe ahụ. A kpọkwara Jizọs na ndị na-eso ụzọ ya ka ha bịa oriri alụmdi na nwunye ahụ. Mgbe mmanya gwụwara, nne Jizọs sịrị ya: “Ha enweghị mmanya.” Ma Jizọs sịrị ya: “Nwaanyị, olee otú o si gbasa mụ na gị? Oge m erubeghị.” Nne ya wee sị ndị na-eje ozi: “Meenụ ihe ọ bụla ọ gwara unu.” E nwere ite nkume isii e ji agbanye mmiri a dọsara n’ebe ahụ n’ihi iwu ndị Juu tiri banyere ịdị ọcha. Nke ọ bụla n’ime ha ga-abali ihe dị ka lita mmiri iri anọ na anọ ma ọ bụ lita iri isii na isii. Jizọs sịrị ha: “Gbajuonụ ite ndị ahụ mmiri.” Ha wee gbajuo ha n’ọnụ. Ọ sịziri ha: “Kurunụ ya bugara onye na-ahazi oriri a.” Ha wee kuru ya bugara ya. Mgbe onye na-ahazi oriri ahụ detụrụ mmiri ahụ e mere ka ọ ghọọ mmanya ọnụ, ebe ọ na-amaghị ebe o si (ọ bụ eziokwu na ndị na-eje ozi bụ́ ndị kupụtara mmiri ahụ ma), ọ kpọrọ nwoke ahụ na-alụ nwaanyị ọhụrụ, sị ya: “Ndị ọzọ na-ebu ụzọ ebupụta mmanya dị mma. Mgbe mmanya gbuwere ndị mmadụ, e bupụtazie nke na-adịchaghị mma. Ma, ị hapụrụ mmanya dị mma ruo ugbu a.” Jizọs mere ihe a na Kena nke dị na Galili. Ọ bụ ya bụ ọrụ ebube mbụ ọ rụrụ. O si otú a mee ka ebube ya pụta ìhè. Ndị na-eso ụzọ ya wee nwee okwukwe n’ebe ọ nọ” (Jọn 2:1-11).
Jizọs Kraịst gwọrọ nwa ohu eze ahụ: “O wee bịaghachi na Kena nke dị na Galili, bụ́ ebe o mere ka mmiri ghọọ mmanya. Na Kapaniọm, e nwere otu onye na-ejere eze ozi nke nwa ya nwoke na-arịa ọrịa. Mgbe nwoke a nụrụ na Jizọs ahapụla Judia bata na Galili, ọ gakwuuru ya wee rịọ ya ka ọ bịa gwọọ nwa ya nwoke maka na ọ nọ n’ọnụ ọnwụ. Ma Jizọs sịrị ya: “Ọ bụrụ na unu ahụghị ọrụ ebube na ihe ịtụnanya, unu emekataghị kweta.” Onye ahụ na-ejere eze ozi sịrị ya: “Onyenwe anyị, bịa tupu obere nwa m anwụọ.” Jizọs sịrị ya: “Lawa, nwa gị agbakeela.” Nwoke ahụ kwetara ihe Jizọs gwara ya wee lawa. Ma ka ọ nọ n’ụzọ na-ala, ndị ohu ya zutere ya ka ha gwa ya na nwa ya nwoke agbakeela. O wee jụọ ha awa ahụ́ dịrị ya mma. Ha sịrị ya: “Ahụ́ ọkụ ahụ kwụsịrị ụnyaahụ, n’awa nke asaa.” Nna nwa ahụ mataziri na ọ gbakere n’awa ahụ Jizọs sịrị ya: “Nwa gị agbakeela.” Ya na ezinụlọ ya niile wee kwere. Ihe a bụ ọrụ ebube nke abụọ Jizọs rụrụ mgbe o si Judia bata na Galili” (Jọn 4:46-54).
Jizọs Kraịst gwọrọ otu nwoke mmụọ ọjọọ ji na Kapanaum: “O wee gbadaa Kapaniọm, bụ́ obodo dị na Galili. O wee na-ezi ha ihe n’Ụbọchị Izu Ike. Otú o si ezi ihe jukwara ha anya, n’ihi na ọ na-ezi ha ihe ka onye Chineke nyere ikike. Ma n’ime ụlọ nzukọ ahụ, e nwere otu nwoke mmụọ ọjọọ ji, onye tiri mkpu, sị: “Jizọs onye Nazaret, gịnị jikọrọ anyị na gị? Ị̀ bịara ibibi anyị? Ama m gị nke ọma, Onye Nsọ nke Chineke.” Ma Jizọs baara ya mba, sị: “Mechie ọnụ, sikwa n’ime ya pụta.” N’ihi ya, mgbe mmụọ ọjọọ ahụ tụchara nwoke ahụ n’ala n’etiti ha, o si n’ime ya pụta n’emerụghị ya ahụ́. O wee ju mmadụ niile anya, ha amalitekwa ịgwa ibe ha, sị: “Olee ụdị okwu bụ ihe a? N’ihi na o ji ikike na ike o nwere na-enye ndị mmụọ ọjọọ iwu, ha ana-apụ.” N’ihi ya, ndị mmadụ nọ na-akọsa banyere ya n’ebe niile gburugburu obodo ahụ” (Luk 4:31-37).
Jizọs Kraịst na-achụpụ ndị mmụọ ọjọọ n’ala ndị Gadara (nke bụ́ Jọdan, n’ebe ọwụwa anyanwụ nke Jọdan, n’akụkụ Ọdọ Mmiri Taịbirias): “Mgbe o ruru n’ofe nke ọzọ, n’obodo ndị Gadara, ya na mmadụ abụọ mmụọ ọjọọ ji, ndị si n’ebe a na-eli ozu na-apụta, zuru n’ụzọ. Ha na-akpa ajọ ike, nke na ọ dịghị onye egwu na-ekwe ịgafe n’ụzọ ahụ. Ma, ha tiri mkpu, sị: “Ọkpara Chineke, gịnị jikọrọ anyị na gị? Ị̀ bịara ebe a imekpa anyị ahụ́ tupu oge a kara aka eruo?” Ma ìgwè ézì nọ na-ata ahịhịa n’ebe dị anya n’ebe ha nọ. Ndị mmụọ ọjọọ ahụ wee malite ịrịọ ya, sị: “Ọ bụrụ na ị chụpụ anyị, hapụ anyị ka anyị banye n’ime ìgwè ézì ndị ahụ.” O wee sị ha: “Banyenụ!” Ha wee pụta banye n’ime ézì ndị ahụ. Ìgwè ézì ahụ niile nuuru daba n’oké osimiri ma nwụọ n’ime mmiri. Ma ndị na-azụ ézì ndị ahụ gbara ọsọ. Mgbe ha banyere n’obodo, ha kọrọ ihe niile mere, kọọkwa gbasara ndị ahụ mmụọ ọjọọ ji. Obodo ahụ niile wee pụta ka ha hụ Jizọs. Mgbe ha hụrụ ya, ha rịọrọ ya ka o si n’ógbè ha pụọ” (Matiu 8:28-34).
Jizọs Kraịst gwọrọ nne nwunye onyeozi: “Mgbe Jizọs batara n’ụlọ Pita, ọ hụrụ nne nwunye Pita ka o dina ala, ahụ́ ọkụ na-emekwa ya. O wee bitụ ya aka n’aka, ahụ́ ọkụ ahụ wee hapụ ya, o wee bilie malite ijere ya ozi” (Matiu 8:14,15).
Jizọs Kraịst gwọrọ otu nwoke onye nwere aka nri kpọnwụrụ akpọnwụ: "N’ụbọchị izu ike ọzọ, ọ banyere n’ụlọ nzukọ ma malite izi ihe. E nwekwara otu nwoke aka nri ya kpọnwụrụ akpọnwụ nọ ebe ahụ. Ndị odeakwụkwọ na ndị Farisii nọ na-ele Jizọs anya ka ha hụ ma ọ̀ ga-agwọ ọrịa n’Ụbọchị Izu Ike, n’ihi na ha na-achọ ihe ha ga-eji bo ya ebubo. Ma, ọ ma ihe ha na-atụgharị n’uche. N’ihi ya, ọ gwara nwoke ahụ aka ya kpọnwụrụ akpọnwụ, sị: “Bilie, guzoro n’etiti.” O wee bilie guzoro ebe ahụ. Jizọs sịziri ha: “Ka m jụgodị unu, Iwu ò kwuru ka a na-eme ihe ọma n’Ụbọchị Izu Ike ka ọ̀ bụ ihe ọjọọ, ịzọ ndụ ka ọ̀ bụ ibibi ya?” Mgbe o lechara ha niile anya, ọ sịrị nwoke ahụ: “Gbatịa aka gị.” O wee gbatịa aka ya, aka ya adị mma. Ma ezigbo iwe were ha, ha amalite ịgba izu ihe ha ga-eme Jizọs" (Luk 6:6-11).
Jizọs Kraịst gwọrọ otu nwoke na-ata ahụhụ site na edema, oke mkpokọta nke mmiri n'ime ahụ: "N’otu Ụbọchị Izu Ike, Jizọs banyere n’ụlọ otu onye na-achị achị bụ́ onye Farisii ịga rie nri. Ha nọkwa na-ele ya anya ka ha mara ihe ọ ga-eme. Ma, e nwere otu nwoke nọ ebe ahụ ụkwụ ya na aka ya zara aza. Jizọs wee jụọ ndị Farisii na ndị ahụ ma Iwu, sị: “È kwesịrị ịgwọ ọrịa n’Ụbọchị Izu Ike, ka ọ̀ bụ na e kwesịghị?” Ma ha gbachiri nkịtị. N’ihi ya, o seere nwoke ahụ n’aka, gwọọ ya ma sị ya lawa. O wee sị ha: “Ò nwere onye n’ime unu nwa ya nwoke ma ọ bụ ehi ya ga-adaba n’olulu mmiri n’Ụbọchị Izu Ike, ya ahapụ ịdọpụta ya ozugbo?” Ma, ha azalighị ya ajụjụ a" (Luk 14:1-6).
Jizọs Kraịst gwọọ otu nwoke kpuru ìsì: “Ma ka ọ na-eru Jeriko nso, otu onye ìsì nọ ọdụ n’akụkụ okporo ụzọ na-arịọ arịrịọ. N’ihi na ọ nụrụ ka ìgwè mmadụ na-agafe, ọ malitere ịjụ ase ihe nke a pụtara. Ha kọọrọ ya, sị: “Jizọs onye Nazaret na-agafe!” O wee tie mkpu, sị: “Jizọs, Nwa Devid, meere m ebere!” Ndị bu ụzọ wee malite ịgwasi ya ike ka o mechie ọnụ, ma ọ nọ na-etisikwu mkpu ike, sị: “Nwa Devid, meere m ebere.” Jizọs wee guzoro otu ebe ma nye iwu ka e dutere ya nwoke ahụ. Mgbe o rutere nso, Jizọs jụrụ ya, sị: “Gịnị ka ị chọrọ ka m meere gị?” O wee sị: “Onyenwe anyị, mee ka m hụwa ụzọ.” Ya mere, Jizọs sịrị ya: “Hụwa ụzọ; okwukwe gị emewo ka ahụ́ dị gị mma.” O wee hụwa ụzọ n’otu ntabi anya, ọ malitekwara iso ya, na-enye Chineke otuto. Mgbe ndị ahụ niile hụrụ ya, ha nyere Chineke otuto" (Luk 18:35-43).
Jizọs Kraịst gwọrọ ndị ìsì abụọ: “Mgbe Jizọs si ebe ahụ na-apụ, ndị ìsì abụọ sooro ya, na-eti mkpu, sị: “Nwa Devid, meere anyị ebere.” Mgbe Jizọs banyere n’ime ụlọ, ndị ìsì ahụ bịakwutere ya, o wee jụọ ha, sị: “Ùnu nwere okwukwe na m ga-emeli ihe a?” Ha asị ya: “Ee, Onyenwe anyị.” O wee bitụ ha aka n’anya, sị: “Ka e meere unu ihe unu rịọrọ n’ihi na unu nwere okwukwe.” Anya ha wee meghee. Jizọs gwasikwara ha ike, sị: “Ya enwekwala onye unu ga-akọrọ ya.” Ma mgbe ha pụrụ n’èzí, ha kọsara ya n’ógbè ahụ niile” (Matiu 9:27-31).
Jizọs Kraịst gwọrọ onye ogbi: “Mgbe Jizọs si n’ógbè Taya na-alaghachi, o si na Saịdọn nakwa ógbè Dikapọlis gafere ruo n’Oké Osimiri Galili. N’ebe a, ha kpọtaara ya otu nwoke ntị chiri, nke ọ na-esikwara ike ikwu okwu. Ha rịọrọ ya ka ọ gwọọ ya. O wee kpọpụ ya n’ebe ìgwè mmadụ ahụ nọ ma rụnye mkpịsị aka ya n’ime ntị abụọ nwoke ahụ. Ọ gbụpụkwara asọ mmiri, metụ nwoke ahụ aka n’ire. O leliziri anya n’eluigwe, kuda ume ma sị ya: “Efata,” ya bụ, “Meghee.” Ntị ya wee meghee, nsogbu ọ na-enwe n’ikwu okwu lakwara. O wee malite ikwu okwu nke ọma. Jizọs gwara ndị nọ n’ebe ahụ ka ha ghara ịkọrọ ya onye ọ bụla. Ma, ka ọ na-enyekwu ha iwu ka ha na-akọsakwu ya. N’eziokwu, o riri ha ọnụ, ha asị: “Ihe niile o mere dị ezigbo mma. Ọ na-emedị ka ndị ntị chiri nụ ihe, na-emekwa ka ndị ogbi kwuo okwu.”” (Mak 7:31-37).
Jizọs Kraịst gwọrọ onye ekpenta: "Otu onye ekpenta bịakwutekwara ya, ọbụna gbuo ikpere n’ala na-arịọsi ya arịrịọ ike, sị ya: “Ọ bụrụ nnọọ na ị chọrọ, ị pụrụ ime ka m dị ọcha.” N’ihi nke ahụ, o nwere ọmịiko, o wee matịa aka ya bitụ ya aka, sị ya: “Achọrọ m. Dị ọcha.” Ekpenta ahụ pụrụ n’ahụ́ ya ozugbo, o wee dị ọcha" (Mak 1:40-42).
Ọgwụgwọ nke ndị ekpenta iri: “Ka ọ na-aga Jeruselem, o si n’agbata Sameria na Galili na-agafe. Ka ọ na-abanyekwa n’otu obodo, ndị ekpenta iri hụrụ ya. Ma ha guzo n’ebe dị anya. Ha wee tie mkpu, sị: “Jizọs, Onye Ozizi, meere anyị ebere!” Mgbe ọ hụrụ ha, ọ sịrị ha: “Gaanụ gosi ndị nchụàjà onwe unu.” Ma ka ha na-aga, a gwọrọ ha. Mgbe otu n’ime ha hụrụ na a gwọọla ya, ọ laghachiri, jiri oké olu na-eto Chineke. O wee gbuo ikpere n’ala, kpudo ihu n’ala n’ụkwụ Jizọs, na-ekele ya. Ọ bụkwa onye Sameria. Jizọs sịrị ya: “Ọ́ bụghị mmadụ iri ka a gwọrọ? Oleekwanụ mmadụ itoolu ndị ọzọ? E wezụga nwoke a bụ́ onye mba ọzọ, è nwere onye ọzọ lọghachiri ka o too Chineke?” O wee sị ya: “Bilie lawa. Okwukwe gị emeela ka ahụ́ dị gị mma.”” (Luk 17:11-19).
Jizọs Kraịst gwọọ onye ọrịa mkpọnwụ: "Mgbe ihe ndị a gasịrị, otu ememme ndị Juu ruru. Jizọs wee gbagoo Jeruselem. Na Jeruselem, n’ọnụ ụzọ ámá atụrụ, e nwere otu ọdọ mmiri a na-akpọ n’asụsụ Hibru Betzeta, nke veranda ya nwere ahịrị ogidi ise. N’ebe ndị a ka ìgwè ndị ọrịa, ndị ìsì, ndị akụkụ ahụ́ ha kpọnwụrụ akpọnwụ, dina. Ma otu nwoke nọ n’ebe ahụ, onye nọ na-arịa ọrịa kemgbe afọ iri atọ na asatọ. Mgbe Jizọs hụrụ nwoke a ka o dina ala, ebe ọ makwaara na ọ nọworị na-arịa ọrịa ruo ogologo oge, ọ sịrị ya: “Ị̀ chọrọ ka ahụ́ dị gị mma?” Onye ọrịa ahụ zara ya, sị: “Nna anyị ukwu, enweghị m onye ga-eme ka m banye n’ime ọdọ mmiri a mgbe mmiri a mere ụṅara; kama mgbe m na-abịa, onye ọzọ na-ebu m ụzọ abanye.” Jizọs wee sị ya: “Bilie buru ihe ndina gị gawa ije.” Ahụ́ wee dị nwoke ahụ mma ozugbo, o bukwaara ihe ndina ya wee malite ịga ije” (Jọn 5:1-9).
Jizọs Kraịst gwọrọ akwụkwụ na-adọ: “Mgbe ha bịara ebe ìgwè mmadụ nọ, otu nwoke bịakwutere ya, gbuoro ya ikpere n’ala, sị ya: “Onyenwe anyị, meere nwa m nwoke ebere, n’ihi na ọ bụ onye akwụkwụ, ọnọdụ ya dịkwa njọ. Ọ na-adabakarị n’ọkụ, na-adabakwa na mmiri ọtụtụ mgbe. M kpọtaara ya ndị na-eso ụzọ gị, ma ha enweghị ike ịgwọ ya.” Jizọs wee sị: “Unu ọgbọ na-enweghị okwukwe, nke rụkwara arụ, ruo ole mgbe ka mụ na unu ga-anọ tupu unu enwee okwukwe? Ruo ole mgbe ka m ga na-edi ihe unu na-eme? Kpọtara m ya ebe a.” Jizọs wee baara mmụọ ọjọọ ahụ mba, ya esi n’ime nwatakịrị nwoke ahụ pụta. E wee gwọọ ya n’oge ahụ. Ndị na-eso ụzọ Jizọs wee bịakwute ya mgbe naanị ya nọ, sị: “Gịnị mere na anyị achụpụlighị ya?” O wee sị ha: “Ọ bụ n’ihi na okwukwe unu dị ntakịrị. N’ihi na n’eziokwu, ana m asị unu, ọ bụrụ na unu enwee okwukwe há ka mkpụrụ osisi mọstad, unu ga-asị ugwu a, ‘Si ebe a gafee ebe nke ọzọ,’ ọ ga-agafe, ọ dịghịkwa ihe na-agaghị ekwe unu omume.”” (Matiu 17:14-20).
Jizọs Kraịst na-arụ ọrụ ebube na-amaghị ya: "Ka Jizọs nọ na-aga, ìgwè mmadụ nọ na-adagide ya. E nwere otu nwaanyị na-arịa ọrịa oruru ọbara kemgbe afọ iri na abụọ. O nwebeghịkwa onye nwere ike ịgwọ ya. O si n’azụ bịaruo Jizọs nso ma bitụ ọnụ ọnụ uwe elu ya aka. Ozugbo ahụkwa, ọrịa oruru ọbara na-arịa ya akwụsị. Jizọs wee sị: “Ònye bitụrụ m aka?” Mgbe ha niile nọ na-agọ agọ, Pita sịrị: “Onye Ozizi, ìgwè mmadụ gbara gị gburugburu ma na-adagide gị.” Ma Jizọs sịrị: “O nwere onye bitụrụ m aka, n’ihi na ama m na ike pụrụ m n’ahụ́.” Mgbe nwaanyị ahụ hụrụ na Jizọs amatala ihe o mere, ọ maara jijiji bịa sekpuru ala n’ihu ya, kwuokwa n’ihu mmadụ niile ihe mere o ji bitụ ya aka na otú e si gwọọ ya ozugbo. Ma ọ sịrị ya: “Nwa m nwaanyị, okwukwe gị emeela ka ahụ́ dị gị mma. Lawa n’udo.”" (Luk 8:42-48).
Jizọs Kraịst na-agwọ ọrịa site n'ebe dị anya: "Mgbe ọ gwachara ìgwè mmadụ ahụ ihe niile ọ chọrọ ịgwa ha, ọ banyere Kapaniọm. Ma, e nwere otu onyeisi ndị agha ohu ya ọ hụrụ n’anya na-arịa ọrịa, nọrọkwa n’ọnụ ọnwụ. Mgbe ọ nụrụ banyere Jizọs, o ziri ụfọdụ ndị okenye ndị Juu ka ha gaa rịọ ya ka ọ bịa gwọọ ohu ya. Ha bịakwutere Jizọs malite ịrịọsi ya ike, sị: “Nwoke a kwesịrị ka i meere ya ihe a, n’ihi na ọ hụrụ obodo anyị n’anya, ọ rụkwaara anyị ụlọ nzukọ.” N’ihi ya, Jizọs sooro ha gawa. Ma mgbe o rutewere ụlọ onyeisi ndị agha ahụ nso, nwoke ahụ ziri ndị enyi ya ka ha gwa Jizọs, sị: “Nna anyị ukwu, enyela onwe gị nsogbu, n’ihi na ekwesịghị m ka ị bata n’ụlọ m. Ọ bụ ya mere na mụ abịaghị n’onwe m. Kama kwuo naanị okwu, ahụ́ ga-adịkwa onye na-ejere m ozi mma. N’ihi na n’agbanyeghị na m nọ n’okpuru ndị ọzọ, e nwekwara ndị agha nọ n’okpuru m. M na-asị onye agha nke a, ‘Gawa!’ ya agawa. M na-asịkwa onye nke ọzọ, ‘Bịa!’ ya abịa. M na-asịkwa ohu m, ‘Mee nke a!’ ya emee ya.” Mgbe Jizọs nụrụ ihe ndị a, o juru ya anya, ya atụgharịa chee ìgwè mmadụ na-eso ya n’azụ ihu, sị ha: “Ana m asị unu, ahụtụbeghị m onye okwukwe ya siri ike otú a n’Izrel.” Mgbe ndị ahụ e ziri ozi laghachiri n’ụlọ ahụ, ha hụrụ na ahụ́ adịla ohu ahụ mma" (Luk 7:1-10).
Jizọs Kraịst agwọla otu nwaanyị nwere nkwarụ ruo afọ iri na asatọ: “N’otu Ụbọchị Izu Ike, Jizọs nọ n’otu ụlọ nzukọ na-ezi ihe. Ma, e nwere otu nwaanyị nọ ebe ahụ mmụọ ọjọọ mere ka ọ na-arịa ọrịa kemgbe afọ iri na asatọ. Nwaanyị a na-ehu ehu, o nweghịkwa ike iguzo kwem. Mgbe Jizọs hụrụ ya, ọ gwara ya, sị: “Nwaanyị, a gwọọla gị ọrịa gị.” O bikwasịkwara ya aka, ya eguzoro kwem n’otu ntabi anya, malite ito Chineke. Ma iwe were onyeisi oche ụlọ nzukọ ahụ maka na Jizọs gwọrọ onye ahụ n’Ụbọchị Izu Ike, ya asị ìgwè mmadụ ahụ: “E nwere ụbọchị isii e kwesịrị ịrụ ọrụ. N’ihi ya, bịanụ n’ụbọchị ndị ahụ ka a gwọọ unu. Unu abịala n’Ụbọchị Izu Ike.” Ma, Onyenwe anyị sịrị ya: “Ndị ihu abụọ, ò nwere onye n’ime unu na-anaghị atọpụ ehi ya ma ọ bụ jakị ya n’ụlọ anụ n’Ụbọchị Izu Ike ma kpụrụ ya gaa ka o nye ya mmiri? Setan mere ka nwaanyị a, bụ́ nwa Ebreham, na-arịa ọrịa a kemgbe afọ iri na asatọ. Ọ̀ bụ na e kwesịghị ịgwọ ya n’Ụbọchị Izu Ike?” Mgbe o kwuru ihe a, ihere malitere ime ndị niile na-emegide ya. Ma ìgwè mmadụ ahụ niile malitere ịṅụrị ọṅụ n’ihi ihe niile dị ebube o mere” (Luk 13:10-17).
Jizọs Kraịst gwọrọ ada nke nwanyị Finishia: "Mgbe Jizọs si ebe ahụ pụọ, ọ gawara Taya na Saịdọn. Ma, otu nwaanyị Finishia nke si n’ógbè ahụ bịakwutere ya wee tie mkpu, sị: “Meere m ebere, Onyenwe anyị, Nwa Devid. Mmụọ ọjọọ ji nwa m nwaanyị aka ọjọọ.” Ma ọ tụpụrụghị nwaanyị ahụ ọnụ. N’ihi ya, ndị na-eso ụzọ ya bịara malite ịgwa ya, sị: “Sị ya lawa, n’ihi na ọ na-ebe ákwá na-esogharị anyị.” O wee, sị: “E zitere m maka atụrụ furu efu, bụ́ mba Izrel, ọ bụghị maka ndị ọ bụla ọzọ.” Ma nwaanyị ahụ bịara, kpọọrọ ya isiala, sị: “Onyenwe anyị, nyere m aka.” Ya asị ya: “E kwesịghị iwere nri ụmụaka tụpụrụ ụmụ nkịta.” O wee sị: “Ọ bụ eziokwu, Onyenwe anyị. Ma, ụmụ nkịta na-eri iberibe ihe si na tebụl nna ha ukwu na-adapụsị.” Jizọs gwaziri ya, sị: “Nwaanyị, i nwere ezigbo okwukwe. Ka e meere gị ihe ị rịọrọ.” E wee gwọọ nwa ya nwaanyị n’oge ahụ" (Matiu 15:21-28).
Jizọs Kraịst ama etre oyobio ete: “Mgbe ọ banyere n’ụgbọ mmiri, ndị na-eso ụzọ ya sooro ya. Ma, lee! oké ifufe malitere ife n’oké osimiri ahụ, nke mere na ebili mmiri nọ na-ekpuchi ụgbọ ahụ; otú ọ dị, ọ na-ehi ụra. Ha wee bịa kpọtee ya, sị: “Onyenwe anyị, zọpụta anyị, anyị na-aga ịla n’iyi!” Ma ọ sịrị ha: “Gịnị mere obi ji na-amapụ unu, unu ndị okwukwe nta?” O wee bilie baara ifufe ahụ na oké osimiri ahụ mba, ebe niile wee daa jụụ. O wee ju ha anya, ha wee sị: “Olee ụdị mmadụ onye a bụ, nke na ọbụna ifufe na oké osimiri na-erubere ya isi?”” (Matiu 8:23-27). Ọrụ ebube a gosipụtara na paradaịs elu ala agaghị enwe oké mmiri ozuzo ma ọ bụ ide mmiri nke ga-akpata ọdachi.
Jizọs Kraịst na-eje ije n'elu oké osimiri: "Mgbe ọ gwachara ìgwè mmadụ ahụ ka ha lawa, naanị ya gbagoro n’elu ugwu ikpe ekpere. Ọ nọkwa ebe ahụ naanị ya ruo mgbede. Ka ọ dịgodị, ụgbọ mmiri ahụ esila n’akụkụ osimiri ahụ gaa ọtụtụ narị mita, ebili mmiri mekwara ka o sie ike ịkwọ ya, n’ihi na ifufe na-efesi ike. Ma n’oge nche nke anọ nke abalị, o jeere ije n’elu oké osimiri ahụ na-abịakwute ha. Mgbe ndị na-eso ụzọ ya hụrụ ya ka ọ na-eje ije n’elu oké osimiri ahụ, obi mapụrụ ha, ha asị: “Ọ bụ mmụọ!” Ha wee tie mkpu n’ihi egwu ha na-atụ. Ma, Jizọs gwara ha ozugbo, sị: “Nweenụ obi ike. Ọ bụ m. Unu atụla egwu.” Pita gwara ya, sị: “Onyenwe anyị, ọ bụrụ na ọ bụ gị, gwa m ka m bịakwute gị n’elu mmiri.” O wee sị: “Bịa.” Pita esizie n’ụgbọ ahụ pụta, jere ije n’elu mmiri ahụ gakwuruwe Jizọs. Ma mgbe ọ hụrụ oké ifufe ahụ, egwu tụrụ ya. Mgbe ọ malitekwara imikpu, o tiri mkpu, sị: “Onyenwe anyị, zọpụta m!” Jizọs matịrị aka ozugbo, jide ya wee sị ya: “Onye okwukwe nta, gịnị mere i ji nwewe obi abụọ?” Mgbe ha banyere n’ụgbọ ahụ, oké ifufe ahụ kwụsịrị. N’ihi ya, ndị nọ n’ụgbọ ahụ kpọọrọ ya isiala, sị: “Ị bụ Ọkpara Chineke n’eziokwu.”" (Matiu 14:23-33).
Azụ ahụ dị ebube na-ejide: “N’otu oge, Jizọs guzo n’akụkụ ọdọ mmiri Genesaret, ìgwè mmadụ ana-enu ibe ha aka ka ha ruo ya nso gere okwu Chineke. O wee hụ ụgbọ abụọ a dọsara n’akụkụ ọdọ mmiri ahụ, ma ndị ọkụ azụ̀ esila na ha pụta na-asacha ụgbụ ha. Ka ọ banyere n’otu n’ime ụgbọ ndị ahụ, ọ gwara Saịmọn, onye nwe ụgbọ ahụ, ka ọ kwọrọ ya banyekwuo na mmiri. O wee nọrọ n’ụgbọ ahụ, malitekwa izi ìgwè mmadụ ahụ ihe. Mgbe ọ kwụsịrị ịgwa ìgwè mmadụ ahụ okwu, ọ sịrị Saịmọn: “Kwọrọ ụgbọ a banye n’ebe miri emi, wụnyekwanụ ụgbụ unu ka unu gbute azụ̀.” Ma Saịmọn sịrị ya: “Onye Ozizi, n’agbanyeghị anya niile anyị mụrụ n’abalị, anyị egbuteghị ihe ọ bụla. Ma, ebe ị sị m wụnye ụgbụ na mmiri, m ga-awụnye ya.” Mgbe ha wụnyere ya, ha gbutere ọtụtụ azụ̀, nke mere na ụgbụ ha malitere ịdọka. N’ihi ya, ha feere ndị ibe ha nọ n’ụgbọ nke ọzọ aka ka ha bịa nyere ha aka. Ha bịakwara kpojuo ụgbọ abụọ ahụ, nke mere na ụgbọ ndị ahụ malitere imi. Mgbe Saịmọn Pita hụrụ ihe a, ọ dara n’ala n’ụkwụ Jizọs, sị: “Onyenwe anyị, si ebe m nọ pụọ, n’ihi na abụ m onye mmehie.” N’ihi na mgbe ha gbutere azụ̀ ndị ahụ, o juru ya na ndị niile ya na ha nọ anya. O jukwara ma Jems ma Jọn, ụmụ Zebedi, anya, bụ́ ndị ha na Saịmọn na-arụkọ ọrụ. Ma Jizọs sịrị Saịmọn: “Kwụsị ịtụ egwu. Si ugbu a gawa, ị ga na-akụta ndị mmadụ ná ndụ.” N’ihi ya, ha kwọọrọ ụgbọ ndị ahụ gaghachi n’elu ala. Ha hapụkwara ihe niile soro ya” (Luk 5:1-11).
Jizọs Kraịst na-amụba ogbe achịcha: "Mgbe e mechara, Jizọs gara n’ofe nke ọzọ nke Oké Osimiri Galili, ma ọ bụ Taịbirias. Ìgwè mmadụ nọkwa na-eso ya n’ihi na ha na-ahụ ọrụ ebube ndị ọ na-arụ mgbe ọ na-agwọ ndị ọrịa. Jizọs wee rịgoro n’elu ugwu ma nọrọ ala n’ebe ahụ, ya na ndị na-eso ụzọ ya. Ememme Ngabiga, bụ́ ememme ndị Juu na-eme, na-erukwa nso. Mgbe Jizọs leliri anya hụ na ìgwè mmadụ na-abịakwute ya, ọ jụrụ Filip, sị: “Ebee ka anyị ga-azụta achịcha ndị a ga-ata?” Ma, o kwuru ihe a ka ọ mara ihe dị Filip n’obi n’ihi na ọ ma ihe ọ na-aga ime. Filip zara ya, sị: “E jirigodị narị mkpụrụ ego dinarịọs abụọ (200) zụta achịcha, ọ gaghị ezu onye ọ bụla n’ime ha inweta ntakịrị.” Otu n’ime ndị na-eso ụzọ ya, bụ́ Andru nwanne Saịmọn Pita, sịrị ya: “Lee nwata nwoke bu ogbe achịcha ọka bali ise na obere azụ̀ abụọ. Ma olee otú ha ga-esi zuoro ọtụtụ mmadụ a?” Jizọs wee sị: “Gwanụ ha ka ha nọdụ ala.” Ebe ọ bụ na ahịhịa juru eju n’ebe ahụ, ha nọdụrụ ala. Ụmụ nwoke nọ n’ebe ahụ dị ihe dị ka puku ise (5,000). Jizọs weere achịcha ahụ. Mgbe o kelechara Chineke, o kesaara ha ndị ahụ nọ ọdụ n’ala. Otú ahụ ka o kesakwaara ha obere azụ̀ ahụ. Ha wee rijuo afọ. Mgbe ha rijuchara afọ, ọ gwara ndị na-eso ụzọ ya, sị: “Tụtụkọtanụ ihe ha rifọrọ, ka ihe ọ bụla ghara ịla n’iyi.” Ha wee tụtụkọta iberibe achịcha ndị ahụ tara achịcha ọka bali ise ahụ tafọrọ, ya eju nkata iri na abụọ. Mgbe ndị mmadụ hụrụ ọrụ ebube ndị ọ rụrụ, ha malitere ịsị: “N’eziokwu, onye a bụ Onye Amụma ahụ ga-abịa n’ụwa.” Ma, ebe Jizọs ma na ha na-achọ ịbịa jide ya ka ha mee ya eze, ọ gaghachiri n’ugwu naanị ya" (Jọn 6: 1-15). A ga-enwe ihe oriri n’ụba n’ụwa nile (Abụ Ọma 72:16; Aisaia 30:23).
Jizọs Kraịst ama kpọlitere nwa nwoke nke nwanyị di ya nwụrụ: “Ozugbo nke a gasịrị, ọ gawara obodo a na-akpọ Nen, ndị na-eso ụzọ ya na oké ìgwè mmadụ sokwa ya na-eme njem. Ka o rutere nso n’ọnụ ụzọ ámá obodo ahụ, lee! e nwere onye nwụrụ anwụ a na-ebupụ, bụ́ nwa nwoke nne ya mụrụ naanị ya. E wezụga nke ahụ, ọ bụ nwaanyị di ya nwụrụ. Ìgwè mmadụ dị ukwuu ndị si n’obodo ahụ sokwa ya. Mgbe Onyenwe anyị hụrụ ya, o nwere ọmịiko n’ebe ọ nọ, o wee sị ya: “Kwụsị ịkwa ákwá.” O wee garuo nso ma bitụ ihe ahụ e ji ebu ozu aka, ndị bu ya wee guzoro n’otu ebe, o wee sị: “Nwa okorobịa, ana m asị gị, Bilie!” Onye ahụ nwụrụ anwụ wee bilie nọrọ ọdụ ma malite ikwu okwu, o wee kpọnye ya nne ya. Egwu wee jide ha niile, ha malitekwara inye Chineke otuto, na-asị: “E mewo ka onye amụma dị ukwuu bilie n’etiti anyị,” na-asịkwa, “Chineke echewo ihu ya n’ebe ndị ya nọ.” Akụkọ a banyere ya wee gbasaa ruo Judia dum na ógbè niile gbara ya gburugburu” (Luk 7:11-17).
Jizọs Kraịst kpọlitere ada Jaịrọs n’ọnwụ: “Ka ọ ka kpụ okwu n’ọnụ, otu onye nnọchiteanya nke onyeisi oche ụlọ nzukọ bịara, sị: “Nwa gị nwaanyị anwụọla; enyezila onye ozizi nsogbu.” Mgbe Jizọs nụrụ nke a, ọ zara ya, sị: “Atụla egwu, naanị nwee okwukwe, a ga-azọpụta ya.” Mgbe o rutere n’ụlọ ahụ, o kweghị ka onye ọ bụla soro ya banye ma e wezụga Pita na Jọn na Jems na nne na nna nwata nwaanyị ahụ. Ma mmadụ niile nọ na-akwa ákwá, na-eti aka n’obi wee na-eruru ya uju. O wee sị: “Kwụsịnụ ịkwa ákwá, n’ihi na ọ nwụghị anwụ kama ọ na-ehi ụra.” Ha wee malite ịchị ya ọchị, na-akwa ya emo, n’ihi na ha maara na ọ nwụwo. Ma o seere ya n’aka ma kwuo n’olu dara ụda, sị: “Nwata nwaanyị, bilie!” Mmụọ ya wee laghachi, o wee bilie ozugbo ahụ, o nyekwara iwu ka e nye ya ihe ka o rie. Ndị mụrụ ya wee jupụta n’obi ụtọ; ma ọ gwara ha ka ha ghara ịkọrọ onye ọ bụla ihe merenụ" (Luk 8:49-56).
Jizọs Kraịst kpọlitere enyi ya Lazarọs, nwụrụ anwụ ụbọchị anọ gara aga: “N’eziokwu, Jizọs abatabeghị n’obodo nta ahụ, kama ọ ka nọ n’ebe ahụ Mata zutere ya. Ya mere, mgbe ndị Juu ha na ya nọ n’ụlọ, ndị na-akasi ya obi, hụrụ Meri ka o biliri ọsọ ọsọ pụọ, ha sochiri ya, n’ihi na ha chere na ọ na-aga n’ili ncheta ịga kwaa ákwá n’ebe ahụ. Mgbe Meri bịarutere n’ebe Jizọs nọ ma hụ ya, ọ dara n’ụkwụ ya, sị ya: “Onyenwe anyị, a sị na ị nọ n’ebe a, nwanne m nwoke agaraghị anwụ.” Ya mere, mgbe Jizọs hụrụ ka ọ na-akwa ákwá nakwa ka ndị Juu so ya bịa na-akwa ákwá, ọ sụrụ ude n’ime mmụọ ya, o nyekwara ya nsogbu; o wee sị: “Olee ebe unu liri ya?” Ha sịrị ya: “Onyenwe anyị, bịa lee ya.” Anya mmiri gbara Jizọs. Ya mere, ndị Juu malitere ịsị: “Lee ka o si hụ ya n’anya nke ukwuu!” Ma ụfọdụ n’ime ha sịrị: “Nwoke a nke meghere anya onye ìsì ahụ, ó nweghị ike igbochi onye a ịnwụ?”
N’ihi ya, mgbe Jizọs sụsịrị ude ọzọ n’ime onwe ya, ọ bịara n’ili ncheta ahụ. N’eziokwu, ọ bụ ọgba, e jikwa otu nkume dọchie ọnụ ya. Jizọs sịrị: “Kwapụnụ nkume ahụ.” Mata, bụ́ nwanne onye ahụ nwụrụ anwụ, sịrị ya: “Onyenwe anyị, ka ọ dị ugbu a, ọ ghaghị ịbụ na o siwela ísì, n’ihi na o meela ụbọchị anọ.” Jizọs sịrị ya: “Ọ̀ kwa m gwara gị na ọ bụrụ na i kwere, ị ga-ahụ ebube Chineke?” Ya mere, ha kwapụrụ nkume ahụ. Ma Jizọs leliri anya n’eluigwe wee sị: “Nna, ana m ekele gị na ị nụwo olu m. N’eziokwu, amaara m na ị na-anụ olu m mgbe niile; ma ekwuru m okwu n’ihi ìgwè mmadụ a ndị guzo gburugburu, ka ha wee kwere na ọ bụ gị zitere m.” Mgbe o kwuru ihe ndị a, o ji oké olu tie mkpu, sị: “Lazarọs, pụta!” Nwoke ahụ nwụrụ anwụ wee buru ákwà e kere ya n’ụkwụ na n’aka pụta, e kekwara ya ákwà n’ihu. Jizọs sịrị ha: “Tọpụnụ ya ákwà ma hapụ ya ka ọ laa”” (Jọn 11:30-44).
Azụ ahụ dị ebube na-ejide (obere oge ka Kraist bilitesịrị n’ọnwụ): “Mgbe chi na-abọ, Jizọs guzo n’ikpere osimiri ahụ. Ma ndị na-eso ụzọ ya amataghị na ọ bụ ya. Jizọs wee sị ha: “Ụmụntakịrị, ùnu nwere ihe ọ bụla unu ga-eri?” Ha sịrị ya: “Mba.” O wee sị ha: “Wụnyenụ ụgbụ n’akụkụ aka nri nke ụgbọ mmiri unu, unu ga-egbute azụ̀.” Ha wee wụnye ya, ma ha enweghịzi ike ịdọbata ya n’ụgbọ ha n’ihi ọtụtụ azụ̀ juru na ya. Onye ahụ na-eso ụzọ Jizọs, onye Jizọs hụrụ n’anya, sịrị Pita: “Ọ bụ Onyenwe anyị.” Mgbe Saịmọn Pita nụrụ na ọ bụ Onyenwe anyị, o yiiri uwe elu ya n’ihi na ọ gba ahụ́ ọtọ. O wee maba n’oké osimiri ahụ. Ma ndị ọzọ na-eso ụzọ Jizọs, ndị nọ n’obere ụgbọ ahụ, kwọọrọ ụgbọ ahụ ma dọkpụrụ ụgbụ ahụ azụ̀ juru pụtawa n’ihi na ebe ha nọ adịghị anya n’ikpere osimiri ahụ. Ọ dị ihe dị ka mita iri itoolu” (Jọn 21:4-8).
Jizọs Kraịst rụrụ ọtụtụ ọrụ ebube ndị ọzọ. Ha na-ewusi okwukwe anyị ike, na-agba anyị ume ma na-amata ọtụtụ ngọzi ga-adị n'ụwa. Okwu Jọn onyeozi dere edekọwo ọtụtụ ọrụ ebube ndị Jizọs Kraịst mere, iji gosi na ihe ga-eme n'ụwa ga-eme: “N’eziokwu, e nwere ọtụtụ ihe ndị ọzọ Jizọs mere, bụ́ ndị, ọ bụrụ na e dee ha edee n’ụzọ zuru ezu, m chere na ụwa apụghị ịba akwụkwọ mpịakọta ndị e dere ha” (Jọn 21:25).
Ozizi elementrị nke Akwụkwọ Nsọ
Chineke nwere Aha: Jehova: "Abụ m Jehova. Ọ bụ ya bụ aha m; agaghị m enye onye ọzọ nsọpụrụ m, agaghịkwa m enye ihe oyiyi a pịrị apị otuto m" (Aisaya 42:8) (YHWH LE NOM RÉVÉLÉ). Anyị aghaghị ife naanị Jehova: "I kwesịrị ekwesị, Jehova, bụ́ Chineke anyị, ịnata otuto na nsọpụrụ na ike, n’ihi na ọ bụ gị kere ihe niile, ọ bụkwa n’ihi uche gị ka ha ji dịrị, ọ bụkwa ya mere e ji kee ha" (Mkpughe 4:11) (ADORATION À JÉHOVAH). Anyi aghaghi ihu Ya n'anya na ndu anyi nile: "O wee sị ya: “Jiri obi gị dum na mkpụrụ obi gị dum na uche gị dum hụ Jehova bụ́ Chineke gị n’anya.’ Ọ bụ ya bụ iwu kasị ukwuu, bụrụkwa nke mbụ" (AMatiu 22:37,38). Chineke abụghị Atọ n'Ime Otu. Atọ n'Ime Otu abụghị ozizi nke Akwụkwọ Nsọ.
Jizọs Kraịst bụ Ọkpara Chineke naanị ya n'echiche na Chineke kere ya n'onwe ya: "Ma mgbe Jizọs banyere n’akụkụ ụfọdụ nke Sesaria Filipaị, ọ malitere ịjụ ndị na-eso ụzọ ya, sị: “Ònye ka ndị mmadụ na-asị na Nwa nke mmadụ bụ?” Ha wee sị: “Ụfọdụ na-asị na ị bụ Jọn Onye Na-eme Baptizim, ndị ọzọ na-asị na ị bụ Ịlaịja, ndị ọzọkwa na-asị na ị bụ Jeremaya ma ọ bụ otu n’ime ndị amụma.” O wee sị ha: “Ma, unu onwe unu, ònye ka unu na-asị na m bụ?” Saịmọn Pita zara, sị: “Ị bụ Kraịst, Ọkpara nke Chineke dị ndụ.” Jizọs wee zaa ya, sị: “Obi ụtọ na-adịrị gị, Saịmọn nwa Jona, n’ihi na ọ bụghị anụ ahụ́ na ọbara kpugheere gị ya, kama ọ bụ Nna m nke nọ n’eluigwe" (Matiu 16:13-17, Jọn 1:1-3). Jizọs Kraịst abụghị Chineke Pụrụ Ime Ihe Nile, ọ bụghịkwa akụkụ nke Atọ n'Ime Otu (LE ROI JÉSUS-CHRIST).
Mmụọ nsọ bụ ike ọrụ nke Chineke. Ọ bụghị onye: "Ha hụkwara ihe ndị dị ka ire ọkụ. E kesasịkwara ha, otu dịkwa n’isi onye nke ọ bụla n’ime ha" (Ọrụ 2:3). Mmụọ Nsọ abụghị akụkụ nke Atọ n'Ime Otu.
Akwụkwọ Nsọ bụ Okwu Chineke: "Akwụkwọ Nsọ dum si n’ike mmụọ nsọ Chineke, ọ bara uru iji ya zie ihe, iji ya dọọ mmadụ aka ná ntị, iji ya mee ka ihe guzozie, na iji ya nye ọzụzụ n’ezi omume, ka onye nke Chineke wee ruo eru n’ụzọ zuru ezu, bụrụ onye a kwadebere n’ụzọ zuru ezu ịrụ ezi ọrụ niile" (2 Timoti 3:16,17). Anyị aghaghị ịgụ ya, mụọ ya, ma tinye ya na ndụ anyị: "Kama iwu Jehova na-atọ ya ụtọ, Ọ na-agụkwa iwu ya n’olu dị ala ehihie na abalị. Ọ ga-adịkwa ka osisi a kụrụ n’akụkụ iyi, Nke na-amị mkpụrụ ya n’oge ya, Akwụkwọ ya adịghịkwa akpọnwụ akpọnwụ, Ihe ọ bụla ọ na-eme ga-aga nke ọma" (Abụ Ọma 1:1-3) (LECTURE DE LA BIBLE).
Naanị okwukwe n'àjà nke Kraist na-enye ohere mgbaghara nke mmehie na ịgwọ ọrịa na mbilite n'ọnwụ nke ndị nwụrụ anwụ n'ọdịnihu: "N’ihi na Chineke hụrụ ụwa n’anya nke ukwuu nke na o nyere Ọkpara ọ mụrụ naanị ya, ka e wee ghara ibibi onye ọ bụla nke nwere okwukwe na ya, kama ka o nwee ndụ ebighị ebi. (...) Onye nwere okwukwe n’Ọkpara ahụ nwere ndụ ebighị ebi; onye na-enupụrụ Ọkpara ahụ isi agaghị ahụ ndụ, kama ọnụma Chineke na-adịgide n’ahụ́ ya" (Jọn 3:16, Matiu 20:28) (SACRIFICE DU CHRIST).
Alaeze Chineke bu ochichi nke elu-igwe nke emere ka ha guzosie ike na elu igwe na 1914, nke Eze ahu bu Jisos Kraist nebe ndi eze na ndi nchu aja iri anọ na puku iri anọ na abia bu "Jerusalem ohuru", nwunye Kraist. Ọchịchị a nke eluigwe nke Chineke ga-ejedebe ọchịchị mmadụ ugbu a n'oge Oké Mkpagbu ahụ, ọ ga-eguzosie ike n'ụwa: "Ma n’ụbọchị ndị eze ahụ, Chineke nke eluigwe ga-eme ka otu alaeze nke a na-agaghị ebibi ebibi malite ịchị. A gaghịkwa enyefe ndị ọ bụla ọzọ alaeze ahụ. Ọ ga-egwepịa alaeze ndị a niile, mee ka ha ghara ịdịkwa, ma ya onwe ya ga-adịru mgbe ebighị ebi" (Mkpughe 12:7-12, 21:1-4, Matiu 6:9,10, Daniel 2:44) (ROYAUME DE DIEU; FIN DU PATRIOTISME).
Ọnwụ bụ ọdịiche nke ndụ. Mkpụrụ obi anwụọ. Mmụọ, ike ndụ, na-apụ n'anya: "Unu atụkwasịla ndị a ma ama obi, Unu atụkwasịkwala nwa nke mmadụ obi, bụ́ onye ọ na-adịghị nzọpụta dị n’aka ya. Mmụọ ya na-apụ, o wee laghachi n’ala o si pụta; N’ụbọchị ahụ, echiche ya na-ala n’iyi" (Abụ Ọma 146:3,4, Ecclesiastes 3:19,20; 9:5,10).
A ga-enwe mbilite n'ọnwụ nke ndị ezi omume na ndị na-ezighị ezi: "Ka ihe a ghara iju unu anya, n’ihi na oge awa na-abịa mgbe ndị niile nọ n’ili ncheta ga-anụ olu ya wee pụta, ndị mere ezi ihe ga-enweta mbilite n’ọnwụ nke ndụ, ndị mere ajọ omume ga-enweta mbilite n’ọnwụ nke ikpe" (Jọn 5:28, 29, Ọrụ 24:15) (RÉSURRECTION PARADIS). A ga-ekpe ndị na-ezighị ezi ikpe na-adabere n'àgwà ha n'oge ịchịchị 1000: "M wee hụ otu nnukwu ocheeze dị ọcha na onye nọ ọdụ na ya. Ụwa na eluigwe sikwa n’ihu ya gbapụ, ọ dịghịkwa ebe a hụrụ ha ga-adị. M wee hụ ndị nwụrụ anwụ, ndị ukwu na ndị nta, ka ha guzo n’ihu ocheeze ahụ, e meghekwara akwụkwọ mpịakọta dị iche iche. Ma e meghere akwụkwọ mpịakọta ọzọ; ọ bụ akwụkwọ mpịakọta nke ndụ. E kpekwara ndị nwụrụ anwụ ikpe site n’ihe e dere n’akwụkwọ mpịakọta ndị ahụ, dị ka omume ha si dị. Oké osimiri hapụkwara ndị nwụrụ anwụ nọ n’ime ya, ọnwụ na Hedis hapụkwara ndị nwụrụ anwụ nọ n’ime ha, e kpekwara ha ikpe n’otu n’otu dị ka omume ha si dị" (Mkpughe 20:11-13) (LES INJUSTES JUGÉS).
Ọ bụ naanị mmadụ 144,000 ga-eso Jizọs Kraịst gaa n'eluigwe: "M wee hụ, ma, lee! Nwa Atụrụ ahụ ka o guzo n’Ugwu Zayọn, ya na otu narị puku na puku iri anọ na puku anọ, bụ́ ndị e dere aha ya na aha Nna ya n’egedege ihu ha. M wee nụ ụda nke si n’eluigwe, dị ka ụda nke ọtụtụ mmiri, dịkwa ka ụda nke oké égbè eluigwe; ụda ahụ m nụrụ dịkwa ka nke ndị na-agụ egwú, bụ́ ndị ji ụbọ akwara na-abụ abụ mgbe ha na-akpọ ụbọ akwara ha. Ha na-abụkwa abụ nke dị ka ọ̀ bụ abụ ọhụrụ n’ihu ocheeze ahụ na n’ihu ihe anọ ahụ dị ndụ na ndị okenye ahụ; ọ dịghịkwa onye nwere ike ịmụta abụ ahụ ma e wezụga otu narị puku na puku iri anọ na puku anọ ahụ, bụ́ ndị e si n’ụwa zụta. Ndị a bụ ndị na-ejighị ụmụ nwaanyị merụọ onwe ha; n’eziokwu, ha bụ ndị na-amaghị nwaanyị. Ndị a bụ ndị na-eso Nwa Atụrụ ahụ n’agbanyeghị ebe ọ na-eje. E si n’etiti ụmụ mmadụ zụta ha dị ka mkpụrụ mbụ a zụtaara Chineke na Nwa Atụrụ ahụ, a hụghịkwa okwu ụgha ọ bụla n’ọnụ ha; ha enweghị mmerụ" (Mkpughe 7:3-8; 14:1-5) (RÉSURRECTION CÉLESTE). Oké ìgwè mmadụ ahụ a kpọtụrụ aha ná Mkpughe 7:9-17 bụ ndị ga-alanarị oké mkpagbu ahụ ma biri ruo mgbe ebighị ebi na paradaịs elu ụwa: "Mgbe ihe ndị a gasịrị, ahụrụ m, ma, lee! oké ìgwè mmadụ, nke onye ọ bụla na-enweghị ike ịgụta ọnụ, ndị si ná mba niile na ebo niile na ndị niile na asụsụ niile pụta, ka ha guzo n’ihu ocheeze ahụ nakwa n’ihu Nwa Atụrụ ahụ. Ha yi uwe mwụda na-acha ọcha; ha jikwa igu nkwụ n’aka. (...) M wee sị ya ozugbo: “Onyenwe m, ọ bụ gị onwe gị maara.” O wee sị m: “Ndị a bụ ndị si n’oké mkpagbu ahụ pụta, ha asawokwa uwe mwụda ha, meekwa ka ọ na-acha ọcha n’ime ọbara Nwa Atụrụ ahụ. Ọ bụ ya mere ha ji nọrọ n’ihu ocheeze Chineke; ha na-ejekwara ya ozi dị nsọ ehihie na abalị n’ụlọ nsọ ya; Onye ahụ nke nọ ọdụ n’ocheeze ahụ ga-agbasakwa ụlọikwuu ya n’isi ha. Agụụ agaghị agụ ha ọzọ, akpịrị agaghị akpọ ha nkụ ọzọ, anwụ agaghị achakwa ha, ha agaghịkwa enwe oké okpomọkụ, n’ihi na Nwa Atụrụ ahụ, onye nọ n’etiti ocheeze ahụ, ga-azụ ha dị ka atụrụ, ọ ga-edugakwa ha n’isi iyi nke mmiri nke ndụ. Chineke ga-ehichapụkwa anya mmiri ọ bụla n’anya ha" (Mkpughe 7:9-17) (LA GRANDE FOULE).
Anyị na-ebi n'ụbọchị ikpeazụ nke ga-agwụ n'oké mkpagbu ahụ (Matiu 24, 25, Mak 13, Luk 21, Mkpughe 19: 11-21): "Mgbe ọ nọ ọdụ n’Ugwu Oliv, ndị na-eso ụzọ ya bịakwutere ya naanị ha, sị ya: “Gwa anyị, Olee mgbe ihe ndị a ga-eme, gịnị ga-abụkwa ihe ịrịba ama nke ọnụnọ gị na nke ọgwụgwụ usoro ihe a?"" (Matiu 24:3) (10 TISHRI).
Paradaịs ga-adị n'ụwa: "M wee hụ eluigwe ọhụrụ na ụwa ọhụrụ; n’ihi na eluigwe mbụ na ụwa mbụ agabigawo, oké osimiri adịkwaghị. Ahụkwara m obodo nsọ ahụ, bụ́ Jeruselem Ọhụrụ, ka o si n’eluigwe, n’ebe Chineke nọ, na-agbadata. A kwadebekwara ya dị ka nwaanyị a na-alụ ọhụrụ nke a chọrọ mma maka di ya. M wee nụ ka otu oké olu si n’ocheeze ahụ na-asị: “Lee! Ụlọikwuu nke Chineke dịnyeere mmadụ, ya na ha ga-ebikwa, ha ga-abụkwa ndị nke ya. Chineke n’onwe ya ga-anọnyekwara ha. Ọ ga-ehichapụkwa anya mmiri niile n’anya ha, ọnwụ agaghị adị ọzọ, iru uju ma ọ bụ mkpu ákwá ma ọ bụ ihe mgbu agaghịkwa adị ọzọ. Ihe mbụ niile agabigawo" (Aịsaịa 11,35,65, Mkpughe 21:1-5) (15 TISHRI LIBÉRATION).
Chineke kwere ka ihe ọjọọ dịrị. Nke a zara azịza nke ekwensu ahụ banyere ọbụbụeze nke ọbụbụeze Jehova (Jenesis 3:1-6) (SATAN EXPULSÉ AVANT). Na kwa inye azịza nye ebubo nke ekwensu banyere iguzosi ike n'ezi ihe nke ndi mmadu (Job 1:7-12; 2:1-6). Ọ bụghị Chineke na-akpata nhụjuanya: "N’oge ọnwụnwa, ka onye ọ bụla ghara ịsị: “Ọ bụ Chineke na-anwa m.” N’ihi na a pụghị iji ihe ọjọọ nwaa Chineke, ya onwe ya adịghịkwa anwa onye ọ bụla" (Jemes 1:13). Ahụhụ bụ ihe kpatara isi ihe anọ: Ekwensu nwere ike ibu ọrụ (ma obugh mgbe nile) (Job 1: 7-12; 2: 1-6). Nhụjuanya bụ n 'ọnọdụ mmehie anyị nke ịdata Adam na-eduga anyị n'agadi, ọrịa na ọnwụ (Ndị Rom 5:12, 6:23). Nhụjuanya nwere ike ịbịpụta n'ihi mkpebi ọjọọ mmadụ (Deuterọnọmi 32: 5, Ndị Rom 7:19). Nhụjuanya nwere ike ịbịpụta "oge na ihe ndị a na-atụghị anya ya" nke mere ka onye ahụ nọrọ n'ọnọdụ na-ezighị ezi n'oge na-ekwesịghị ekwesị (Eklisiastis 9:11). Anyị nwere ikike nnwere onwe, anyị nweere onwe anyị ime mkpebi, "mma" ma ọ bụ "ọjọọ" (Diuterọnọmi 30: 15).
Anyị aghaghị ijere ozi ọma nke alaeze Chineke ozi. Iji mee baptizim na ime ihe kwekọrọ n'ihe edeworo n'ime Akwụkwọ Nsọ: "Ya mere, gaanụ mee ndị mba niile ka ha bụrụ ndị na-eso ụzọ m. Na-eme ha baptizim n’aha nke Nna na nke Ọkpara na nke mmụọ nsọ. Na-ezi ha ka ha debe+ ihe niile m nyere unu n’iwu. Ma, lee! m nọnyeere unu ụbọchị niile ruo ọgwụgwụ usoro ihe a" (Matiu 28:19, 20) (LE BAPTÊME QUI SAUVE). Nkwado siri ike a maka ihu ọma nke ala eze Chineke gosipụtara n'ihu ọha site n'ịkwusa Oziọma ahụ mgbe nile: "A ga-ekwusakwa ozi ọma nke a nke alaeze n’elu ụwa dum mmadụ bi ka ọ bụrụ àmà nye mba niile; mgbe ahụkwa ka ọgwụgwụ ga-abịa" (Matiu 24:14) (LA BONNE NOUVELLE).
A machibidoro n'ime Bible
A machibidoro ịkpọasị: "Onye ọ bụla nke kpọrọ nwanna ya asị bụ ogbu mmadụ, unu makwaara na ọ dịghị ogbu mmadụ nke nwere ndụ ebighị ebi n’ime ya" (1 Jon 3:15). A igbu ọchụ machibidoro, igbu ọchụ maka ihe ndị mere onwe ya, igbu ọchụ site na ịhụ mba n'anya (ndọrọ ndọrọ ọchịchị ma ọ bụ okpukpe): "Jizọs wee sị ya: “Mịghachi mma agha gị n’ọbọ ya, n’ihi na ndị niile na-eji mma agha ga-ala n’iyi site ná mma agha" (Matiu 26:52) (LE RESPECT DE LA VIE; FIN DU PATRIOTISME).
A machibidoro izu ohi: "Ka onye na-ezu ohi kwụsị izu ohi, kama ka ọ rụsie ọrụ ike, jiri aka ya na-arụ ọrụ ọma, ka o wee nwee ihe ọ ga-ekenye onye nọ ná mkpa" (Ndị Efesọs 4:28).
A machibidoro ugha: "Unu adịla na-aghara ibe unu ụgha. Yipụnụ mmadụ ochie ahụ na omume ya" (Ndi Kọlọsi 3:9).
Iwu ndị ọzọ
"N’ihi na ọ dị mmụọ nsọ mma, dịkwa anyị onwe anyị mma ka anyị ghara ịtụkwasịkwuru unu ibu arọ, ma e wezụga ihe ndị a dị mkpa, ya bụ, ịdị na-ezere ihe e ji chụọrọ arụsị àjà, na ọbara na anụ a nyagburu anyagbu na ịkwa iko. Ọ bụrụ na unu elezie anya zere ihe ndị a, ọ ga-adịrị unu mma. Nọrọnụ nke ọma!" (Olu 15:19,20,28,29).
Lhe ndị arụsị merụrụ: Ndị a bụ "ihe" ndị metụtara omume okpukpe megidere Akwụkwọ Nsọ, ememe ememe ndị ọgọ mmụọ. O nwere ike ịbụ ihe omume okpukpe tupu igbummadu ma ọ bụ nri nke anụ: "Na-erinụ ihe niile a na-ere n’ọdụ anụ, n’ajụghị ase ọ bụla n’ihi akọ na uche unu; n’ihi na “ọ bụ Jehova nwe ụwa na ihe jupụtara n’ime ya.” Ọ bụrụ na onye ọ bụla n’ime ndị na-ekweghị ekwe akpọọ unu òkù, unu achọọkwa ije, rienụ ihe ọ bụla e debere n’ihu unu, n’ajụghị ase ọ bụla maka akọ na uche unu. Ma ọ bụrụ na onye ọ bụla asị unu: “Ihe a bụ ihe e ji chụọ àjà,” unu erila ya n’ihi onye ahụ mere ka unu mara banyere ya nakwa n’ihi akọ na uche. “Akọ na uche,” ka m na-ekwu, ọ bụghị nke gị, kama nke onye ọzọ ahụ. N’ihi na, gịnị mere ọ ga-eji bụrụ na akọ na uche onye ọzọ na-ekpe nnwere onwe m ikpe? Ọ bụrụ na m ji ekele na-eri ya, gịnị mere a ga-eji na-ekwujọ m n’ihe ahụ m na-enye ekele maka ya?" (1 Ndị Kọrint 10:25-30).
Banyere omume okpukpe nke Akwụkwọ Nsọ na-akatọ: "Unu na ndị na-ekweghị ekwe ekekọtala onwe unu, nke bụ́ nkekọ na-ekwekọghị ekwekọ. N’ihi na olee ihe jikọrọ ezi omume na mmebi iwu? Ma ọ bụ, olee òkè ìhè na ọchịchịrị nwere? Oleekwa nkwekọ dị n’etiti Kraịst na Bilial? Ma ọ bụ, olee òkè onye kwere ekwe na onye na-ekweghị ekwe nwere? Oleekwa nkwekọrịta ụlọ nsọ Chineke na arụsị nwere? N’ihi na anyị bụ ụlọ nsọ nke Chineke dị ndụ; dị nnọọ ka Chineke kwuru, sị: “M ga-ebi n’etiti ha, na-ejegharịkwa n’etiti ha, m ga-abụkwa Chineke ha, ha ga-abụkwa ndị m.” “‘Ya mere, sinụ n’etiti ha pụọ, kewapụnụ onwe unu,’ ka Jehova sịrị, ‘kwụsịkwanụ imetụ ihe na-adịghị ọcha aka’”; “‘m ga-akpọbatakwa unu.’” “‘M ga-abụkwara unu nna, unu ga-abụkwara m ụmụ ndị ikom na ụmụ ndị inyom,’ ka Jehova Onye Pụrụ Ime Ihe Niile kwuru" (2 Ndị Kọrịnt 6:14-18).
Emela ikpere arụsị. Mmadu aghagh i ibibi ihe oyiyi nile nke arusi ma, obe, ihe oyiyi maka nzube okpukpe: "Sinụ n’ọnụ ụzọ ámá dị warara banye; n’ihi na okporo ụzọ nke na-eduba ná mbibi sara mbara ma dị obosara, ndị na-esikwa na ya abanye dị ọtụtụ; ma ọnụ ụzọ ámá nke na-eduba ná ndụ dị warara, okporo ụzọ ya dịkwa mkpagide, ndị na-achọta ya dịkwa ole na ole. “Lezienụ anya maka ndị amụma ụgha ndị na-abịakwute unu n’oyiyi atụrụ, ma n’ime ha, ha bụ anụ ọhịa wolf agụụ ji. Unu ga-amata ha site ná mkpụrụ ha. Ọ dịghị mgbe ndị mmadụ na-aghọrọ mkpụrụ vaịn n’ogwu ma ọ bụ mkpụrụ fig n’uke, ka hà na-eme otú ahụ? Otú ahụ, osisi ọma ọ bụla na-amị ezi mkpụrụ, ma osisi ọ bụla rere ure na-amị mkpụrụ na-abaghị uru; osisi ọma apụghị ịmị mkpụrụ na-abaghị uru, osisi rere ure apụghịkwa ịmị ezi mkpụrụ. A na-egbutu osisi ọ bụla na-adịghị amị ezi mkpụrụ ma tụba ya n’ọkụ. Ya mere, n’ezie, unu ga-amata ndị ahụ site ná mkpụrụ ha. “Ọ bụghị onye ọ bụla nke na-asị m, ‘Onyenwe anyị, Onyenwe anyị,’ ga-aba n’alaeze eluigwe, kama ọ bụ onye na-eme uche Nna m nke nọ n’eluigwe ga-aba na ya. Ọtụtụ mmadụ ga-asị m n’ụbọchị ahụ, ‘Onyenwe anyị, Onyenwe anyị, ọ̀ bụ na anyị ebughị amụma n’aha gị, chụpụkwa ndị mmụọ ọjọọ n’aha gị, rụọkwa ọtụtụ ọrụ dị ike n’aha gị?’ Ma mgbe ahụ, m ga-ekwupụtara ha, sị: Ọ dịghị mgbe m maara unu! Sinụ n’ebe m nọ pụọ, unu ndị ọrụ mmebi iwu" (Matiu 7:13-23). Emela anwansi: ịgba afa, anwansi, astrology ... anyi aghaghi ibibi ihe nile gbasara anwansi: "N’ezie, ọtụtụ ndị na-eme anwansi chịkọtara akwụkwọ ha ma kpọọ ha ọkụ n’ihu mmadụ niile. Ha wee gbakọọ ọnụ ahịa ha wee hụ na o ruru puku mkpụrụ ego ọlaọcha iri ise. Okwu Jehova wee si otú a na-agbasa ma na-enwe mmeri nke ukwuu" (Olu 19:19,20).
Elela ihe nkiri ma ọ bụ foto ndị na-akpali agụụ mmekọahụ ma ọ bụ ihe ike na ihe ihere. emela na ịgba chaa chaa, ịṅụ ọgwụ ike, dị ka wii wii, betel, ụtaba, ngafe mmanya, orgies: "Ya mere, ụmụnna m, eji m ọmịiko nke Chineke na-arịọsi unu ike ka unu nyefee Chineke ahụ́ unu dị ka àjà dị ndụ, dị nsọ, nke dị Chineke mma, ya bụ, ozi dị nsọ site n’ike iche echiche unu" (ndị Rom 12: 1; Matiu 5: 27-30; Abụ Ọma 11: 5).
A machibidoro ya iwu mmekọahụ rụrụ arụ na (ịkwa iko): ịkwa iko, mmekọahụ n'alụghị di na nwunye (nwoke / nwaanyi), nwoke na nwanyị nwoke idina nwoke: "Gịnị? Ọ̀ bụ na unu amaghị na ndị ajọ omume agaghị eketa alaeze Chineke? Unu ekwela ka e duhie unu. Ndị na-akwa iko, ma ọ bụ ndị na-ekpere arụsị, ma ọ bụ ndị bụ́ di ma ọ bụ nwunye na-akwa iko, ma ọ bụ ndị ikom ndị na-ekwe ka ndị ikom dinaa ha, ma ọ bụ ndị ikom na-edina ndị ikom, ma ọ bụ ndị ohi, ma ọ bụ ndị anyaukwu, ma ọ bụ ndị aṅụrụma, ma ọ bụ ndị na-ekwujọ mmadụ, ma ọ bụ ndị na-apụnara mmadụ ihe, agaghị eketa alaeze Chineke" (1 Ndi Korint 6: 9,10). "Ka alụmdi na nwunye bụrụ ihe kwesịrị nsọpụrụ n’etiti mmadụ niile, ka ihe ndina alụmdi na nwunye gharakwa ịbụ ihe e merụrụ emerụ, n’ihi na Chineke ga-ekpe ndị na-akwa iko na ndị bụ́ di ma ọ bụ nwunye na-akwa iko ikpe" (Ndị Hibru 13:4).
Akwụkwọ Nsọ katọrọ ịlụ nwanyị karịa, nwoke ọ bụla nọ n'ọnọdụ a nke chọrọ ime uche Chineke, aghaghị mgbanwe ọnọdụ ya site n'ịnọgide na nwunye ya mbụ ọ lụrụ (1 Timoti 3: 2 "di nke otu nwaanyị"). Akwụkwọ Nsọ na-amachibido igbo onwe onye mmekọahụ: "Ya mere, meenụ ka akụkụ ahụ́ unu ndị dị n’elu ụwa nwụọ n’ihe banyere ịkwa iko, adịghị ọcha, agụụ mmekọahụ, ọchịchọ ọjọọ, na anyaukwu, nke bụ́ ikpere arụsị" (Ndị Kọlọsi 3:5).
A machibidoro iwu iri ọbara, ọbụna n'ọnọdụ ọgwụgwọ (mmịnye ọbara): "Ma unu erikọtala+ anụ na mkpụrụ obi ya—ọbara ya" (Jenesis 9:4) (LE SACRÉ DU SANG).
Ndị Kraịst tozuru okè na ezi ihe ọmụma nke ụkpụrụ Akwụkwọ Nsọ ga-amata ọdịiche dị n'etiti "ezi" na "ihe ọjọọ," ọ bụrụgodị na edeghị ya na Bible: "Ma nri siri ike dịịrị ndị tozuru okè, ndị zụworo ikike nghọta ha azụ, site n’iji ya eme ihe, ịmata ihe dị iche n’ihe ziri ezi na ihe na-ezighị ezi" (Ndị Hibru 5:14) (MATURITÉ SPIRITUELLE).
Ememe ncheta ọnwụ Jizọs Kraịst